Mampidi-doza Tsotra Izao Ny fanapahan-Dàlana Fahatàny Ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2014 6:31 GMT
Manao vy very ny ainy ireo olom-pirenena miampita ny Avenue Kazi Nazrul Islam ao an-drenivohitra, tsy lavitra eo anefa dia efa misy toerana fiampitàna natao ho an'ny mpandeha an-tongotra. Sary avy amin'i Firoz Ahmed. Fizakàmanana Demotix (30/8/2012)
Tamin'ny Novambra lasa teo, nahavita fanentanana naharitra telo andro ny polisy tao Bangladesh mba hanatsaharana ny fiampitàn'ireo mpandeha an-tongotra eny amin'ireo arabe be fifamoivoizana, nefa tsy any anaty faritra natao ho azy (fiampitàna arabe, na mandeha ao ambanin'ny arabe). Nametraka tribonaly mandehandeha ihany koa ny manampahefana mba hanafay amin'ny alàlan'ny lamandy sy mety ho tonga hatramin'ny fampidirana am-ponja ireo mpandeha an-tongotra anjatony izay miampita fahatàny.
Araka ny lazain'ny polisy, dia fanentanana ho fampahatsiarovantena io. Matetika ny olona ao Bangladesh no miampita amin'ireo arabe be mpifamoivoy ka mitsofotsofoka eny anelanelan'ny fiara eny, manohana ireo fiara mandeha amin'ny alàlan'ny fanofahofany tànana fotsiny, raha tokony hampiasa ireo toerana natao hiampitàny, napetraka ho an'ny mpandeha an-tongotra. Sady loza mitatao ho an'ny daholobe ilay fitondrantena no olana ho an'ny fandrindràna ny fifamoivoizana ihany koa.
Tsy zavatra mandeha ho azy ny famaizana ny fiampitàna fahatàny.
Ao amin'ny fanehoankeviny momba ny tantaram-baovao iray ety anaty serasera, milaza ny olona iray mpampiasa aterinto fa tsy maharaka ireo tetezana kely natao ho an'ny mpandeha an-tongotra:
Faran'izay manelingelina be ny handeha hiakatra amin'ireny tetezana ireny. Na dia ireo olona salama tsara aza dia reraka ihany miampita amin'ireny zavatra ireny. Maro zanatohatra loatra koa ireo fiampitàna ambanin'ny tany (ary tsy misy tohatra ahodi-milina). Alohan'ny hametrahana sazy ara-bola, tokony hohatsaraina kokoa ny faritra ho an'ny mpandeha an-tongotra. Ireny fiampitàna ambony/ambanin'ny tany ireny dia mazàna no feno mpangataka, mpivarotra mandehandeha, sy ireo mpanao doka, ary rakotra vovoka, afisy, haizina, ary fofona ratsy. Tena tsy maintsy atao ny fikarakarana araka ny tokony ho izy ireny fotodrafitrasa ireny. Tokony hasian-dry zareo fanaraha-maso tsy mitsahatra amin'ny alàlan'ny TV mba hampitsaharana ny fanimbàna/fandrobàna. Tena ilaina ihany koa ny fampiasàna fanakadrihana sy tohatra ahodi-milina amin'ny toerana sasany.
Nanoratra tao amin'ny Facebook, Probhash Amin, mpanao gazety ka niteny hoe :
Azonao atao ny mandrisika ny olona hampiasa ireo fiampitàna mihantona sy midina ambanin'ny tany ireo, saingy tsy azonao terena ry zareo. Ankehitriny, ny fisamboran'ny polisy eny an-dàlana ireo mpandeha an-tongotra ary fitondràna azy ireny any amin'ny birao toy ny hoe olo-meloka, misintontsintona azy ireo tsy misy fanajàna, dia mazava loatra fa fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Naka fomba fijery somary masiatsiaka i Kung Thang, bilaogera, tamin'ny nitenenany hoe tokony ho an'ny mpandeha an-tongotra ny arabe :
Ny mpandeha an-tongotra no mpampiasa manan-jo feno amin'ny arabe. Zavatra vao noforonina taty aoriana ny fiara. Afaka mampiasa ny arabe ry zareo saingy tsy amin'ny fandàvana ny zon'ny mpandeha an-tongotra hiampita ny arabe kosa.
Tsara ny manamarika fa zara raha misy ny jiro fandrindràna fifamoivoizana natao ho an'ireo mpandeha an-tongotra amin'ireny fiampitàna ireny ao Bangladesh.
Rasel Parvez, bilaogera, miteny fa tsy mifanaraka amin'ny maha-olona nahita fianarana ny fihetsiky ny polisy :
Hiampita ny arabe ireo mpandeha an-tongotra raha misy jiro mpandrindra eo; zavatra efa mahazatra izany any amin'ireo firenena mandroso. Ny fanomezana tombony ny fiara amin'ny fanilihana ny fandehanana an-tongotra ho any amin'ireo fiampitàna ambony na ambanin'ny tany; mandany fotoana izany ary an'ny olona tsy nahita fandrosoana.
Araka ny antontanisa avy amin'ny “Bangladesh Road and Transport Corporation” , fiara 185 isanandro no tonga manatevina laharana ireo efa eny amin'ny arabe tototra ao Dhaka. Manodidina ny 2-5 isanjato fotsiny amin'ny mponina ao an-toerana (ao amin'ny 210.000 eo) no heverina ho manana fiara. Syed Mahbubur Alam, mpisolovava, miteny fa tsy manaraka ny làlan-tsaina tokony harahana ny fanomezana tombony ny ampahany vitsy tahaka izany amin'ny resaka fifamoivoizana :
Eo ho eo amin'ny 95 isanjaton'ny mponina ao Dhaka no mpandeha an-tongotra, mpivoy bisikilety, na mpampiasa fiara fitaterana iombonana. Mandeha eny an-dalambe ny ankamaroan'ireny olona ireny. Tsy rariny ny finiavana tsy hijery ny fitarainan'ny 95 isanjato mba ho fanomezana fahafahampo an'ireo 2 isanjato monja.
Kallol Mustafa, bilaogera sady mpikatroka mafàna fo avy amin'ny elatra havia, manao fanentanana ho an'ny “zon'ireo maro an'isa mpandeha an-tongotra manoloana ny zon'ny tsirairay amin'ny mpamily.” Araka ny ambaran'i Marufa Rahman, mpampiasa Facebook, tonga hatramin'ny fampiasàna herisetra ara-batana ny polisy amin'ny tranga sasany, rehefa misambotra ireo mpiampita eny rehetra eny.
Raha ny marina, faran'izay mampidi-doza ho an'ny mpandeha an-tongotra ny arabe ao Dhaka. Ho an'ny 2014 samirery, olona 134 no maty niampita arabe, hoy ny tatitry ny gazety Bengali, Prothom Alo. Tao anatin'ny matoandahatsoratra iray, io gazety io ihany no niteny vao tsy ela akory izay, na dia somary nanjavozavo ihany aza, fa mila manao dingana telo hanaovana izay haha-azo antoka ny fifamoivoizana i Bangladesh, na izany ho an'ny fiara, na ho an'ny mpandeha an-tongotra: (1) mamorona fotodrafitrasa sahaza ny mpandeha an-tongotra, (2) manao fanentanana ho fanabeazana ny daholobe mikasika ny fotodrafitrasa vaovao sy ny fitsipiky ny fifamoivoizana, ary (3) mametraka lalàna hentitra hampitsaharana ny fandikàn-dalàna.